उनको महिमा बुना भयो मंक
बुना भयो माइंक विशिष्ट कपडाहरू सिर्जना गर्न विशेष प्रविधि हो। यो फर को एक भनिन्छ यार्न को गठन (पछि बुनाई क्रोध या सुई बुनाई संग) को लागी।
बुना हुआ माइंक कपडाहरू मात्र एक रमणीय नरम छैन र सहज छन्, तर धेरै पहिरन-प्रतिरोधी पनि, अद्वितीय र अद्वितीय बुनाई प्रविधिको लागि सबै धन्यवाद।
जाडोको आगमनले मानिसहरू अग्रिम तयार गर्न प्रयास गर्दै छन्, गहिरो बाह्ररी किन्न। अनि त्यसपछि जाडोको लागि धेरै आवश्यक चीजहरू खरिद छ, जस्तै फर कोट, भेडाको कोट, तल जैकेट। यो अवधिमा साँचो र मौलिक छनौट विशेष र स्वादिष्ट बुनेटेड मिंक कपडाहरूको अधिग्रहण गरिनेछ। तर, दुर्भाग्यवश, सर्दिसको मौसममा गर्मीहरू भन्दा धेरै उत्पादनहरू महँगो हुन्छन्। यसको कारण, यदि तपाईंसँग आवश्यक कुरा खरिद गर्ने मौका छैन, मलाई विश्वास गर्नुहोस्, तपाईले बिक्रीको अवधिको प्रतीक्षा गर्नुपर्छ र अविश्वसनीय सुन्दर सुन्दर बुनगुना उत्पादनको साथमा भोग्नु पर्छ र कम मूल्यहरुसँग सन्तुष्ट रहनु पर्छ।
आफ्नै हातले बुना भयो मंक
यसलाई आफैलाई जोड्न, पहिले तपाईंलाई बुझ्न आवश्यक छ कि बुना भयो फर छ। पल लशमैन एक मशहूर फैशन डिजाइनर हो, त्यो बुनाई को एक समान तरिका को उपयोग गर्ने पहिलो थियो। यो प्रविधिले भित्र र बाहिर दुवैबाट फर को स्थानलाई सम्बोधन गर्दछ। यसले स्पर्शलाई सुन्दर सुन्दर बनायो।
तर फर को थ्रेड बनाउन को लागी, तपाईंलाई पर्याप्त प्रयास गर्न आवश्यक छ। पहिलो, छाला पतली स्ट्रिप्समा काटिनै पर्छ, त्यसपछि तिनीहरू सँगसँगै बाँध्नु पर्छ। यो गर्नका लागि, एक विशेष लचीला आधार प्रयोग गर्नुहोस्। यी हेरफेरले लामो समयसम्म कपडाको लागि पर्याप्त प्रतिरोधी रहन अनुमति दिन्छ। धेरै आत्म-सम्मानजनक महिलाहरूले ध्यान दिनेछन् कि बुनायुक्त मङ्कबाट चीजहरू साधारण उत्पादनबाट उनीहरूको ढाँचामा फरक फरक छन्। तिनीहरूको नाप लामो छैन। विभिन्न तरिकामा धन्यवाद, बुना भयो मङ्कले तपाईंलाई यी वा अन्य प्रकारको furs बाट विभिन्न ढाँचाहरू सिर्जना गर्न अनुमति दिन्छ ।
तपाईलाई किन खरिद गर्न आवश्यक छ:
यो यी सहायक उपकरणहरू हुन् जुन मुख्य रूपमा मांक बुनाईको हातमा पुर्याउन आवश्यक छ।
बुना भयो मंक उत्पादनहरू
यस प्रकार सिर्जना गरिएका विभिन्न प्रकारका एक विस्तृत छनौटबाट बाहिर। तर सबैभन्दा प्रसिद्ध, बेशक, विवाह bolero, poncho, stoles, टोपीहरू विचार गर्न सकिन्छ। एक बुना भयो मन्क भट्टे पनि यिनी लोकप्रियता संग लोकप्रिय छ। तर सबैभन्दा सुरुवात चीजले फर फर कोटलाई विचार गर्न सकिन्छ, जुन मिठाई, स्कार्फ र बुनेटेड मिंक टोपीहरू समावेश छन्। अन्तिम उत्पादनको आफ्नै विवरणहरू छन्, त्यसैले यो सबैसँग उपयुक्त हुनेछैन। यस्तो हेडका मालिकसँग अनुहारको निश्चित रूप हुनु पर्छ, त्यसैले यो कुरा उनको फिट हुनेछ।
प्रायः, बुना भयो माइंक टोपीले एक गोल मानक आकार बनाउँछ, स्फूर्तिसाथ फिटिंग। यस उत्पादन को मात्रा फर फर बना संग संलग्न छ। बुना भयो माइंक सबै भन्दा सुलभ र सामान्य सामग्री हो जसको साथ तपाईं वास्तविक उत्कृष्ट बनाउन सक्नुहुन्छ।
Brioche (बुनाई): प्रविधि, सुविधाहरू र समीक्षाहरूको विवरण
कसरी आफ्नै हातहरूबाट शिल्पहरू बनाउने?
Phonophoresis र अल्ट्रासाउंड peeling: प्रभाव र कोर प्रविधी
Electroplane "Makita": सिंहावलोकन, विनिर्देशों, मोडेल र मालिकको समीक्षा
एउटा विवाह फोटोग्राफर चाहिन्छ, कसरी छनौट गर्ने?
एक किरा ज्योति मा किन मक्खी गर्छ? के प्रकृति इरादा?